rova zuva rekutanga kumhanyisa uye zvibodzwa apple & apos; s ipad mweya (2020) pane yayo yepamusoro yakambodzikisira nhasi
Kuru Nhau & Ongororo Rova iyo Prime Day kumhanyisa uye zvibodzwa Apple & apos; s iPad Mhepo (2020) pane yayo yepamusoro yakambodzikisira nhasi
Rova iyo Prime Day kumhanyisa uye zvibodzwa Apple & apos; s iPad Mhepo (2020) pane yayo yepamusoro yakambodzikisira nhasi
Nekuswedera-pedyo yechitanhatu-gen iPad mini zvese asi zvakavimbiswa kusvina Apple & apos; s yekutanga iPad Mhepo dhizaini kuita compact 8-inch kana zvakadaro muviri uye chaiko yechishanu-gen iPad Mhepo zvakawandisa zvinotarisirwa kuunza hukuru hwekuratidzira kusimudzira patafura munguva pfupi, ungangodaro uchinetseka kana iyo 2020-yakaburitswa iPad Mhepo ichiri kukosha kutenga mazuva ano.
Mhinduro kumubvunzo iwoyo, chokwadika, inosendamira pane zvakawanda zvinosiyana, kutanga nezvazviri chaizvo zvaunoda kubva pahwendefa rako rinotevera, uye pamwe zvinotonyanya kukosha, kuti iwe nemaapos munoda kubhadhara zvakadii chimwe chinhu chinoenderana nezvamunoda uye nezvamunofarira.
Yechina-gen iPad Mhepo, funga iwe, hapana mubvunzo kuti ndeimwe yeese akatenderedza Mahwendefa akanakisa emari anogona kutenga muna 2021 , uye kunyangwe ichangoburwa kugadziriswazve kukuru, gore rino & apos; s iPad mini haizo shandure izvo nenzira ine musoro.
Kazhinji inotengeswa pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu zvichikwira, iyo Apple A14 Bionic-inokwaniswa 10.9-incher yakadzikiswa neanosvika kumadhora makumi mashanu mukumisikidzwa kwayo-kwakawanda nguva zhinji mumwedzi mishoma yapfuura, uye izvo & maapos ndizvozvo chaizvo zvaunogona kuchengetedza izvozvi Amazon zvakare.
Asi iyo e-commerce hofori iri kupawo yakanyanya kukosha mamakisi ekudonhedza $ 89.01 (kana 12 muzana) pane 256GB Wi-Fi-chete musiyano mu rose goridhe. Izvi hazvisi zve Prime Zuva 2021 dhiri, se Amazon & apos; s yakasarudzika 48-awa yekutengesa chiitiko hasn & apos; t yakasarudzwa zviri pamutemo parizvino, asi iyo isina kumbobvira yambotaurwa dhisikaini inoita kunge isinga pfuurirwe chero nguva munguva pfupi.
Muchokwadi, hatizoshamisika kuona iyi yepamusoro yedu runyorwa rwegore & maapos akanakisa Amazon Prime Day piritsi svondo rinouya ... kunze kwekunge, zveshuwa, kukwidziridzwa kunoitika kupera panguva ino.
Muchiitiko chekuti iwe & apos; urikushamisika, mamwe ese asiri-maseru-akagoneswa mazana maviri nemakumi maviri nemashanu magig modhi ari kutengeswa pane yakaderera humbler makumi mashanu emari isingasviki pane yakajairwa. Chekupedzisira, $ 50 inoitikawo kuve ndiyo yaunogona kuveura kubva pamutengo wenguva dzose weApple & apos; s LTE-inotsigira iPad Air (2020) kana iwe usinga & apos; usine dambudziko kusarudza rozi regoridhe rose ne 64 gigs yemuno imba yekuhodha kana iyo 256GB yekuchengetera vhezheni mune nzvimbo grey pendi basa.
gizmowatch vs gizmo tarisa 2
Samsung Galaxy S7 uye S7 Edge: 10 yemitambo yakanakisa
Maitiro ekumisikidza chirongwa cheAT & T pane eSIM yeiyo iPhone XR, XS kana XS Max
Ziva kuti varidzi vanomwe vanogona kuwana dhisikaundi hombe yeChinyorwa 8, heino & apos; s zvese zvaunoda kuti uzive
Mhando dzakanakisa dzeApple Watch